Ba kiraro very: Rahalahy maditra, afaka mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Miverina amin'ny entana izahay mba hampisehoana aminao lalao vaovao izay azo alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra. Androany dia miresaka momba ny ba kiraro very isika: Rahalahy maditra, lalao izay hananantsika fotoana mahafinaritra tokoa. Kaosy very :: Naughty Brothers dia lalao run'n'gun mahavariana misy ambaratonga mihoatra ny 30 miaraka amina tarehimarika marobe, bonus, vato misakana, toerana… izay hanandramanay ny tena fankafizan'ny mahery fo. Very socks dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 4,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny alàlan'ny rohy navelanao tany amin'ny faran'ny lahatsoratra. Izy io koa dia tsy manome karazana fividianana fampiharana.
Saingy tsy ny zava-drehetra dia maloto amin'ity lalao ity, satria tsy mifanaraka amin'ny maodely iPhone rehetra na izany aza eny, miaraka amin'ny Apple TV io.
1 Fitaovana tsy mifanentana amin'ny Lost Rocks: Rahalahy maditra
2 Ba kiraro very: Endri-dehilahy maditra
Fitaovana tsy mifanentana amin'ny Lost Rocks: Rahalahy maditra
Lost Rocks: Manohana ireo mpamily MFI ny Naughty Brothers, izay hahafahantsika mankafy tanteraka ny traikefa filokana omeny antsika. Mitaky farafaharatsiny mba hiasa ny iOS 7 na taty aoriana ary mifanaraka amin'ny Apple TV ihany koa izy io, miaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch izay tsy ao anaty lisitra etsy ambony. Raha te hankafy ny ba kiraro very, dia mila toerana malalaka kely latsaky ny 1 GB amin'ny fitaovantsika.
Ba kiraro very: Endri-dehilahy maditra
Mekanika lalao tena isan-karazany. Ny mpilalao dia afaka mamita ny fanamby rehetra amin'ny fombany.
Ny iraka sy ny fanamby izay mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpilalao mitaky be indrindra.
Karazan-toerana telo misy endriny samy hafa, fametrahana ary haavon'ny pitsiny samihafa.
Maherin'ny 30 ny haavon'ny fahafinaretana.
Tsy misy fividianana fampiharana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ba kiraro very: Rahalahy maditra, afaka mandritra ny fotoana voafetra
Miverena amin'ity maimaimpoana ity amin'izao fotoana izao.